GỤỌ NKE Afrikaans Albanian Alur American Sign Language Amharic Arabic Argentinean Sign Language Armenian Armenian (West) Ashaninka Australian Sign Language Austrian Sign Language Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Baoule Bassa (Cameroon) Batak (Dairi) Batak (Toba) Belgian French Sign Language Belize Kriol Bengali Bicol Bislama Bolivian Sign Language Brazilian Sign Language British Sign Language Bulgarian Cambodian Catalan Cebuano Changana (Mozambique) Chichewa Chilean Sign Language Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chinese Sign Language Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Chol Cibemba Colombian Sign Language Costa Rican Sign Language Croatian Croatian Sign Language Cuban Sign Language Cubeo Czech Czech Sign Language Dangme Danish Drehu Dutch Dutch Sign Language Ecuadorian Sign Language Efik Emberá (Northern) English Estonian Ewe Fijian Filipino Sign Language Finnish French French Sign Language Ga Galician Garifuna Georgian German German Sign Language Ghanaian Sign Language Greek Greek Sign Language Guahibo Guambiano Guarani Guatemalan Sign Language Gujarati Gun Haitian Creole Hebrew Hiligaynon Hindi Hiri Motu Honduras Sign Language Hungarian Hungarian Sign Language Icelandic Igbo Iloko Indian Sign Language Indonesian Indonesian Sign Language Inga Irish Sign Language Isoko Israeli Sign Language Italian Italian Sign Language Jamaican Creole Jamaican Sign Language Japanese Japanese Sign Language Javanese Kabiye Kannada Karen (S'gaw) Kazakh Kenyan Sign Language Kikamba Kikaonde Kikongo Kikuyu Kiluba Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kisi Kongo Korean Korean Sign Language Kosraean Krio Kwangali Kwanyama Laotian Latvian Lingala Lithuanian Luganda Lunda Luo Luvale Macedonian Macua Macushi Madagascar Sign Language Malagasy Malawi Sign Language Malay Malayalam Malaysian Sign Language Maltese Mambwe-Lungu Mapudungun Marathi Marshallese Maya Mexican Sign Language Mixtec (Guerrero) Moore Motu Mozambican Sign Language Myanmar Navajo Ndau Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Nepali New Zealand Sign Language Nias Nicaraguan Sign Language Nigerian Sign Language Norwegian Nyaneka Nyungwe Nzema Oromo Ossetian Otetela Panamanian Sign Language Pangasinan Papiamento (Curaçao) Paraguayan Sign Language Pennsylvania German Persian Peruvian Sign Language Polish Polish Sign Language Ponapean Portuguese Portuguese (European) Portuguese Sign Language Punjabi Páez Quebec Sign Language Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Cuzco) Quechua (Huallaga Huánuco) Quechua (Huaylla Wanca) Rapa Nui Romanian Russian Russian Sign Language Salvadoran Sign Language Samoan Sango Sateré-Mawé Sena Sepedi Sepulana Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Setswana Seychelles Creole Shona Silozi Sinhala Slovak Slovak Sign Language Slovenian Slovenian Sign Language Solomon Islands Pidgin South African Sign Language Spanish Spanish Sign Language Sranantongo Sunda Swahili Swahili (Congo) Swati Swedish Swedish Sign Language Swiss German Sign Language Tagalog Tahitian Taiwanese Sign Language Tajiki Tamil Tatar Telugu Tetun Dili Thai Thai Sign Language Ticuna Tigrinya Tiv Tojolabal Tok Pisin Tongan Torres Strait Creole Totonac Tshiluba Tshwa Tsonga Turkish Turkmen Tuvaluan Twi Tzotzil Uighur (Cyrillic) Ukrainian Umbundu Urdu Uruguayan Sign Language Uzbek Uzbek (Roman) Venda Venezuelan Sign Language Vietnamese Wallisian Waray-Waray Wayuunaiki Xavante Xhosa Yoruba Zambian Sign Language Zapotec (Isthmus) Zimbabwe Sign Language Zulu
Mkpughe E Kpugheere Jọn 9:1-21
A fụrụ opi nke ise (1-11)
Otu ahụhụ agafeela, ahụhụ abụọ ọzọ ka na-abịa (12)
A fụrụ opi nke isii (13-21)
9 Mgbe mmụọ ozi nke ise fụrụ opi ya,+ ahụrụ m otu kpakpando nke si n’eluigwe daa n’ụwa. E nyekwara ya mkpịsị ugodi nke olulu abis.*+ 2 O wee meghee olulu abis ahụ, anwụrụ ọkụ dị ka nke si ná nnukwu ekwú esi n’olulu ahụ pụta. Anwụrụ ọkụ a mere ka anyanwụ na ikuku gbaa ọchịchịrị.+ 3 Igurube sikwa n’anwụrụ ọkụ ahụ pụta n’ụwa.+ E nyere ha otu ikike ahụ akpị ndị dị n’ụwa nwere. 4 A gwakwara ha ka ha ghara ibibi ahịhịa ndị dị n’ụwa ma ọ bụ ahịhịa ọ bụla na-acha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ ma ọ bụ osisi ọ bụla. Kama, ka ndị ha ga-emekpa ahụ́ bụrụ naanị ndị mmadụ na-enweghị akara nke Chineke n’egedege ihu ha.+ 5 E nyekwara igurube ndị ahụ ikike ka ha mekpaa ha ahụ́ ọnwa ise, ọ bụghị igbu ha egbu. Ahụ́ ha ga-emekpa ha ga-adịkwa ka mgbe akpị+ gbara mmadụ. 6 N’oge ahụ, ndị mmadụ ga-achọ ọnwụ ma ha agaghị achọta ya. Ha ga-achọkwa ịnwụ ma ọnwụ ga-agbara ha ọsọ. 7 Igurube ndị ahụ yiri ịnyịnya ndị a kwadebere iji gaa agha.+ Ha kpukwa ihe yiri okpueze ọlaedo n’isi, ihu ha dịkwa ka ihu mmadụ. 8 Ma ntutu isi ha dị ka ntutu isi ụmụ nwaanyị. Ezé ha dịkwa ka nke ọdụm.+ 9 Ha yikwa ihe e ji echebe obi, ndị dị ka è ji ígwè mee ha. Ụda nku ha dịkwa ka ụda ụgbọ ịnyịnya ndị ọtụtụ ịnyịnya dọkpụ na-aga agha.+ 10 Ha nwekwara ọdụ, na-agbakwa ka akpị. Ike ha ga-eji mekpaa ndị mmadụ ahụ́ ọnwa ise dịkwa n’ọdụ ha.+ 11 Eze ha bụ mmụọ ozi nke na-achị abis.*+ Na Hibru, aha ya bụ Abadọn.* Ma, na Grik, aha ya bụ Apọlịọn.* 12 Otu ahụhụ agafeela. Ahụhụ abụọ ọzọ+ ka na-abịa ma ihe ndị a gachaa. 13 Mgbe mmụọ ozi nke isii+ fụrụ opi ya,+ anụrụ m olu si na mpi ndị dị n’ebe ịchụàjà ahụ e ji ọlaedo rụọ+ nke dị n’ihu Chineke. 14 Olu ahụ gwara mmụọ ozi nke isii ahụ nke ji opi ahụ, sị: “Tọpụ ndị mmụọ ozi anọ ahụ e kere agbụ ná nnukwu osimiri Yufretis.”+ 15 O wee tọpụ ndị mmụọ ozi anọ ahụ agbụ e kere ha. Ha nọ na-eche ka awa na ụbọchị na ọnwa na afọ ha ga-egbu otu ụzọ n’ụzọ atọ nke ndị mmadụ ruo. 16 Ụsụụ ndị agha ịnyịnya ahụ dị puku iri abụọ ụzọ puku iri:* Anụrụ m ole ha dị. 17 Otú a ka m si hụ ịnyịnya ndị ahụ na ndị na-agba ha n’ọhụụ: Ndị na-agba ha yi ihe e ji echebe obi nke na-acha ọbara ọbara ka ọkụ, na-achakwa anụnụ anụnụ, na-achakwa odo odo ka sọlfọ. Isi ịnyịnya ndị ahụ dịkwa ka isi ọdụm,+ ọkụ na anwụrụ ọkụ na sọlfọ sikwa n’ọnụ ha pụta. 18 Ihe atọ ndị a, ya bụ, ọkụ na anwụrụ ọkụ na sọlfọ ndị si n’ọnụ ha pụta, gburu otu ụzọ n’ụzọ atọ nke ndị mmadụ. 19 Ike ịnyịnya ndị ahụ dị n’ọnụ ha na n’ọdụ ha, n’ihi na ọdụ ha dị ka agwọ, nweekwa isi. Ha na-ejikwa ha emekpa ndị mmadụ ahụ́. 20 Ma, ndị ihe atọ ndị ahụ na-egbughị akwaghị ụta maka ihe ha ji aka ha mee. Ha akwụsịghị ife ndị mmụọ ọjọọ na arụsị e ji ọlaedo na ọlaọcha na ọla kọpa na nkume na osisi mee. Arụsị ndị a anaghị ahụ ụzọ. Ha anaghị anụ ihe. Ha anaghịkwa eje ije.+ 21 Ndị ahụ echegharịghịkwa ma kwụsị igbu mmadụ,* ime mgbaasị, ịkwa iko,* na izu ohi.
^ Ma ọ bụ “olulu na-enweghị nsọtụ.”
^ Abadọn pụtara “Mbibi.”
^ Apọlịọn pụtara “Onye Mbibi.”
^ Ya bụ, narị nde abụọ (200,000,000).
^ Ma ọ bụ “igbu ọchụ.”